अर्थ/बाणिज्य – Yess Khabar
२९ माघ २०७५, मंगलवार ०२:५४२९ माघ २०७५, मंगलवार ०२:५४२९ माघ २०७५, मंगलवार ०२:५४ by Yess KhabarNo Comments
गाई पालन बाट महिनाको २२ लाख आम्दानी
मानिसले आफ्नो जीवन गुजारा गर्नेका लागि विभिन्न पेसाहरु गरिरहेका हुन्छन् गोरखाको पालुङटार नगरपालिका ७ च्याङ्लीका गाईपालक गेजन्द्रराज पन्तले दूध बेचेरै मासिक २२ लाख आम्दानी गरिरहेका छन्। दुई दशकदेखि व्यावसायिक रूपमा गाईपालन थालेका पन्तको कामधेनु गाईपालन केन्द्रमा हाल होलिस्टाइन, जर्सीलगायत जातका ३ सय ६० गाई छन्। जसमध्ये १३० गार्ई दुुहुना छन्। आजको कारोबार दैनिकमा अनुपमा खनालले यो खबर लेखेकी छन्।एउटा गाईले दैनिक १५ देखि ३० लिटरसम्म दूध दिन्छन्। ३० लिटर दूध दिने गाईलाई दिनमा तीन पटक दुहुने गरिएको छ।
२३ माघ २०७५, बुधबार ०३:२०२३ माघ २०७५, बुधबार ०३:२०२३ माघ २०७५, बुधबार ०३:२० by Yess KhabarNo Comments
आज बहराईन दिनारसहित केही देशको मूल्य बढ्यो, अन्य देशको कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैँकले तोकेको विनिमयदर अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १ सय १४ रुपैयाँ २० पैसा छ भने बिक्रिदर मूल्य १ सय १४ रुपैयाँ ८० पैसा रहेको छ। हिजो मंगलबार डलरको भाउ ११४ रुपैयाँ ५९ पैसा रहेको थियो। त्यस्तै दक्षिण कोरियन वनको १०० को खरिददर १० रुपैयाँ २१ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर १० रुपैयाँ २६ पैसा रहेको छ। मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ ९० पैसा छ भने बिक्रिदर २८ रुपैयाँ ५ पैसा छ। त्यस्तै यूके पाउण्डको खरिददर १४८ रुपैयाँ ५३ पैसा छ भने बिक्रिदर १४९ रुपैयाँ ३१ पैसा छ। हिजो सोमबार युके पाउडको मूल्य १४९ रुपैयाँ रहेको थियो । साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ४५ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ६१ पैसा छ। त्यस्तै, कतारी रियाल एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ३६ पैसा छ भने विक्रिदर ३१ रुपैयाँ ५३ पैसा रहेको छ। त्यस्तै कुवेती दिनार एकको खरिददर ३७६ रुपैयाँ ३५ पैसा रहेको
२२ माघ २०७५, मंगलवार १३:५७२२ माघ २०७५, मंगलवार १३:५७२२ माघ २०७५, मंगलवार १३:५७ by Yess KhabarNo Comments
फेरी बढ्यो सुनको मूल्य, आजको भाउ कति ?
काठमाडौं- मंगलबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोला एक सय रुपैंयाले बढेर ६२ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । सोमबार सुन तोलाको ६२ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै आज तेजावी सुन भने प्रतितोला ६२ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ भने चाँदीको प्रतितोला ७८५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
२२ माघ २०७५, मंगलवार १२:४९२२ माघ २०७५, मंगलवार १२:४९२२ माघ २०७५, मंगलवार १२:४९ by Yess KhabarNo Comments
वैदेशिक लगानी घटेपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चासो देखाएका छन्। वैदेशिक लगानीसम्वन्धी प्रक्रियालाई छोट्याउन र सहज गर्न उनले राष्ट्र बैंक तथा बैंकहरुलाई निर्देशन दिए। अर्थ मन्त्रालयमा सम्पन्न उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समिति बैठकमा खतिवडाले आन्तरिक स्रोत परिचालनले मात्र उच्च आर्थिक बृद्धिदर हासिल नहुने भन्दै वैदेशिक लगानीलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे। विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि उद्योग विभाग तथा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिएको एक महिनाभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्थाले समय लम्बिने गरेको छ। झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण वैदेशिक लगानी बढ्न सकेको छैन, उल्टै घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ। चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा नेपालमा विदेशी लगानी ३९ प्रतिशतले कमी आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार
१६ माघ २०७५, बुधबार ०५:२३१६ माघ २०७५, बुधबार ०५:२३१६ माघ २०७५, बुधबार ०५:२३ by Yess KhabarNo Comments
४ करोडको स्याउ एउटै बगैंचामा
लमजुङ — मनाङको मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका–१ भ्राताङको एउटा स्याउबारीमा करिब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको स्याउ फलेको छ । समुद्री सतहदेखि २ हजार ८ सय ५० मिटर उचाइको उक्त स्याउबारीमा यस वर्ष ४ सय टन स्याउ फलेको छ ।एग्रो मनाङले ४ सय ५० रोपनीमा स्याउ फलाएको हो । फलेको स्याउमध्ये ठूला र मझौला दाना ३ सय ५० टन बजारमा बिक्री गरिएको छ । उक्त बगैंचामा इटाली र सर्भियाबाट गाला, गोल्डेन, फुजी जातका हिमाली क्षेत्रमा हुने ‘हाइडेन्सिटी’ स्याउका बोट ल्याएर खेती गरिएको छ । एग्रो मनाङका अध्यक्ष समराज गुरुङका अनुसार गाला स्याउ प्रतिकिलो १ सय ५०, ठूला दाना फुजी स्याउ प्रतिकिलो १ सय ७०, मझौला प्रतिकिलो १ सय ३०, गोल्डेन ठूलो दाना प्रतिकिलो १ सय २० र मझौला दाना प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँमा बिक्री भएको छ । सानो दाना जुस र चिप्सको लागि प्रयोग गरिएको छ । ३ सय ५० मेटन स्याउलाई कम्तीमा प्रतिकिलो १ सय २० रुपैयाँमा बिक्री गरि
१३ माघ २०७५, आईतवार १३:५८१३ माघ २०७५, आईतवार १३:५८१३ माघ २०७५, आईतवार १३:५८ by Yess KhabarNo Comments
रियाद, साउदी अरब । साउदी अरबको प्रसिद्ध पेट्रोल कम्पनी (एसएबीआइसी) ले गत बर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा पेट्रोलको मुल्यमा देखिएको गिरावटका कारण खूद नाफामा पनि गिरावट देखिएपनि सन् २०१८ को समग्र मूल्यमा वृद्धि भएको उक्त कम्पनीले जनाएको छ। साउदी अरबमा सबैभन्दा ठूलो पेट्रोल कम्पनी एसएबीआइसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा गत बर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा कम्पनीको नाफा १२.४ प्रतिशतमा झर्दा ८६ करोड ४० लाख अमेरिकी डलरको कारोबार भएको थियो। सन् २०१७ को सोही समयमा कम्पनीले ९८ करोड ७० लाख अमेरिकी डलरको कारोबार गरेको थियो। कम्पनीले खुद नाफामा कमी हुनुको कारण पेट्रोलको निम्न मूल्य कायम हुनु र कम्पनी आवद्ध संस्थाको कारोबार अभियानमा देखिएको सुस्तता जिम्मेवार भनेको छ। यद्यपि एसएबीआइसीले सन् २०१८ को समग्र कारोबारमा कम्पनीको खुद नाफा १७ प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाएको छ। विश्वका ठूला १० शैलरासायन कारोबार कम्पनीमध
१२ माघ २०७५, शनिबार १०:०८१२ माघ २०७५, शनिबार १०:०८१२ माघ २०७५, शनिबार १०:०८ by Yess KhabarNo Comments
बैंकहरुको ऋणमा ब्याजदर घट्यो ! हेर्नुहोस् नयाँ ब्याजदर, कुन बैंकको कति?
काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६को दोस्रो त्रैमास सकिएसँगै बैंकहरूले ब्याजको आधारदर (बेसरेट) निर्धारण गरेका छन्।बैंकले प्रत्येक तीन–तीन महिनामा नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थाअनुसार नयाँ आधारदर निर्धारण गरेका हुन्।बैंकहरुको आधारदर घटेसँगै ऋणको ब्याजदर पनि घट्छ। आधारदरलाई नै मध्येनजर गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण प्रदान गर्छन्। वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंर्कस संघले निक्षेपको ब्याजदर घटाएर भद्र सहमति गरेसँगै कर्जाको ब्याजदर घटाउन पनि बैंकहरुलाई दबाब परेको थियो।नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले निक्षेपको ब्याज घटेका कारण बैंकहरुको आधार दर पनि घटेको बताए। भने, ‘आधार दर तल आए(घटे) सँगै ऋणको ब्याजदर स्वभाविक रुपमा घट्छ।’ आधार दर जतिले घट्छ, त्यति नै ऋणको ब्याज घटाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको प्रावधान छ।’ यता उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समिति
१० माघ २०७५, बिहीबार १०:२७१० माघ २०७५, बिहीबार १०:२७१० माघ २०७५, बिहीबार १०:२७ by Yess KhabarNo Comments
डाभाेस : सन् २०१८ मा भारतका करोडपतिहरुको सम्पत्तिमा हरेक दिन २२ सय करोड रुपैयाँको दरले बृद्धि भयो । अक्सफामको एक अध्ययनमा के देखाइएको छ भने २०१८ मा मात्रै एक प्रतिशत धनाढ्यहरुको सम्पत्तिमा ३९ प्रतिशतले बृद्धि भयो । यही देशका गरिब जनताको सम्पत्तिमा जम्मा ३ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । अध्ययनका अनुसार भारतका ९ अमिर (उच्च धनाढ्य)हरुको साथ पूरा देशको आधा सम्पत्ति छ । समाचार एजेन्सी पिटिआईका अनुसार स्वीट्जरल्याण्डको डाभोसमा आयोजित ५ दिने विश्व आर्थिक मञ्च सुरु हुनुभन्दा अघि नै अक्सफामले यस्तो रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको हो । रिपोर्ट अनुसार भारतमा १० प्रतिशत मानिससँग मात्रै देशको जम्मा ७७ दशमलब ४ प्रतिशत सम्पत्ति छ । जसमध्ये एक प्रतिशतको साथमा जम्मा ५१ दशमलब ५३ प्रतिशत सम्पत्ति देखिएको हो । जब कि, ६० प्रतिशत मानिसको साथ जम्मा ४ दशमलब ८ प्रतिशत सम्पत्ति छ । सन् २०१८ देखि २०२२ को बीच भारतमा प्र
८ माघ २०७५, मंगलवार १०:२८८ माघ २०७५, मंगलवार १०:२८८ माघ २०७५, मंगलवार १०:२८ by Yess KhabarNo Comments
नेपाल चियामा आत्मनिर्भर बन्दै ,
काठमाडौं। नेपालमा बढी आयात हुने बस्तुहरु मध्येको एक हो चिया तथा कफी। ९७ प्रकारका सामानहरु विभिन्न देशबाट नेपालमा भित्रिने गरेका छन्। बढी आयात हुने मध्यकै नवौं नम्बरमा आयात हुँदै आएको चिया कपीमा भने आत्मनिर्भर हुँदौ आएको देखिन्छ। यो वर्षको ५ महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा आयातकै हाराहारीमा निर्यात पनि भएको छ।नेपालमा सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुन्छ। त्योसँगै सबै आयात हुने बस्तुहरु मध्येका निर्यात हुने भने कुनै छैन। सबै सामानको तथ्याङ्क हेर्दा निर्यात भन्दा आयात नै बढी भएको देखिन्छ। त्यस्तै अन्य बस्तु भन्दा निर्यात पनि धेरै भएको पाइन्छ। जुन आयातको २० औं गुणा कम मात्र निर्यात हुन्छ। चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को ५ महिनामा मात्रै कफी तथा चिया ३ अर्ब ५४ करोड ५८ लाख ३० हजार रुपैयाँको निर्यात भएको छ त्यो पनि अन्य बस्तुहरुको तुलनामा बढी निर्यात भएको मानिएको हो। खर्बौं मूल्य बराबरको आयात हुँ
२६ पुष २०७५, बिहीबार ०४:५५२६ पुष २०७५, बिहीबार ०४:५५२६ पुष २०७५, बिहीबार ०४:५५ by Yess KhabarNo Comments
बढ्यो आज अमेरिकी डलरको भाउ , अन्य देशको भाउ कति पुग्यो ?
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा आज (बिहीबार) अमेरिकी डलरको भाउ बढेको छ। हिजोको तुलनामा आज अमेरिकी डलरको भाउ ४१ पैसाले बढेको हो।नेपाल राष्ट्र बैँकले तोकेको विनिमयदर अनुसार आज नेपाली बजारमा अमेरिकी डलरको खरिददर मूल्य १ सय १२ रुपैयाँ ४४ पैसा छ भने विक्रिदर मूल्य १ सय १३ रुपैयाँ ४ पैसा छ। त्यस्तै एक मलेसियन रिंगिटको खरिददर मूल्य २७ रुपैयाँ ३३ पैसा छ भने बिक्रिदर २७ रुपैयाँ ४७ पैसा छ। त्यस्तै यूके पाउण्डको खरिददर १४३ रुपैयाँ ०६ पैसा छ भने बिक्रिदर १४३ रुपैयाँ ८२ पैसा छ।एक साउदी रियालको खरिददर २९ रुपैयाँ ९७ पैसा छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ १३ पैसा छ। त्यस्तै, एक कतारी रियाल खरिददर ३० रुपैयाँ ८८ पैसा छ भने विक्रिदर ३१ रुपैयाँ ४ पैसा रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य देशको विनिमय दर विस्तृतमा तल